PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-10-29 - Idumela ekhasini elihlanganise izinhlanga
Idumela ekhasini elihlanganise izinhlanga
SELIPHENDUKE undabuzekwayo ikhasi likaFacebook elihlanganisa izinhlanga zabantu balapha eNingizimu Afrika ngenxa yamahlaya ahlanganisa zonke izinhlanga.
IJoburger esungulwe nguLouwrence van Niekerk, ihlanganise izinhlanga ezingcofanayo, ziqhulule amahlaya ziphinde zibuzane imibuzo exakile ngendlela yokuphila yazo.
UVan Niekerk (23) uzichaze kafushane izolo njengomuntu wakuleli osekuphele izinyanga ezintathu eseLondon e-England.
Uthe usungule leli khasi ngemuva kokubona izinto eziningi ezibuhlungu nezidala ukhwantalala kumuntu zenzeka lapha eNingizimu Afrika, wase esungula leli khasi. Inhloso yalo wukuhlanganisa izinhlanga zakuleli ukuze zilwe nobandlululo nokucwasana.
Kuleli khasi uVan
Niekerk ufike abhale isihloko ngamagama amakhulu enika igunya uhlanga oluthile ukuba lubuze imibuzo edidayo ngolunye uhlanga.
“Umuntu omnyama akabuze omhlophe umbuzo omhluphayo noma ikhaladi, omnyama nomhlophe ababuze iNdiya umbuzo ohluphayo.”
Yize imibuzo isuke ibuza izihloko ezixakile ngalolo hlanga kodwa yindlela okuphendulwa ngayo ngobuqiniso eyenza nesihloko esinzima sigcina sesiyihlaya.
UZama Jay ubuze abamhlophe ukuthi : “Kungani ningakwazi ukudansa?”
Impendulo yakhona ivele kuJohn Styn: “Kunzima ukudansa umi emhlabeni esawuntshontsha.”
USegololo ubuze abamhlophe ukuthi kungani bethanda ukudlala ingoma iNkalakatha kaMandoza emcimbini esuke ixube izinhlanga ngoba abamnyama abasayithandi. Uphendulwe yinqwaba yabamhlophe abathe, ukuphela kwengoma abakwazi kahle ukuyidansela.
Omunye obuzwe nguCraig Green kwabamnyama uthi: “Kungani abesifazane abamnyama besusa amashiya baphinde bawadwebe eseyizikwele?” Yize abamnyama bebezama ukuphendula kodwa bafile yinsini abanye bethi kwabona bemnyama abazi ukuthi kwenziwelani.
Maqondana nabomdabu baseNdiya kubuzwe ukuthi kungani uma beya ezitolo baqhamuke beyiqulu, elinganiselwa ko-34. Wonke afuna zonke izinto zihambe ngambili.
Amakhaladi abuzwe ukuthi kungani izintokazi zawo zicikeka uma zibona omunye wabo ethandana nentokazi yolunye uhlanga, zize ziyisabise, kodwa zikhulume isiBhunu uma sezisonga? Izincazelo bezigcina sezihlekisa.
Kushaye isikhathi sokuloba leli khasi selinabalandeli abangu-98 000 yize kungakapheli isonto lakhiwe.